Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း)
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်းသည် လူဦးရေ၏ ၅%တွင် ဖြစ်တတ်သော အသည်းတွင် အရည်ပြည့်နေသည့်အိတ်တည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ များသောအားဖြင့် လက္ခဏာမပြတတ်ပဲ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် သို့ သံလိုက်ဓါတ်မှန်တို့ကဲ့သို့ ဗိုက်အားပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းစုံလာပါမှ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရှိရသည်ဖြစ်သည်။
အသည်းအရည်အိတ် တစ်ခုနှစ်ခုသည် ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ပဲ ကုသရန်လဲ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ အရည်အိတ်များ များလာခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်ကြီးလာခြင်းများဖြစ်ပါက ဆေးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
တစ်ခုထက်ပိုသော အရည်အိတ်များ ကြီးလာလျှင် ဗိုက်ညာဖက်အပေါ်ခြမ်းတွင် မအီမသာ သို့မဟုတ် နာကျင်မှုကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ သိသိသာသာ မအီမသာဖြစ်လာပါက အရည်အိတ်များကို စုပ်ထုတ်ခြင်း သို့ ခွဲထုတ်ခြင်းများ ဆေးရုံတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီလောက်ထိ မဆိုးဝါးခင် သိထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
အရည်အိတ်များသော အသည်းရောဂါ (မျိုးရိုးလိုက်သောရောဂါ)
ကပ်ပါးပိုးကြောင့်အရည်အိတ်တည်ခြင်း (hydatid ရောဂါမျိုးဝ
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်းသည် များသောအားဖြင့် လက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ သို့သော် အိတ်သည်ကြီးလာပါက ဗိုက်အပေါ်ညာဖက်ခြမ်းတွင် ဖောနေခြင်း၊ နာနေခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဗိုက်မှစမ်းလို့ရနိုင်သည်အထိ အရည်အိတ်သည် ကြီးလာနိုင်၏။
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အသည်းဆဲလ်အနည်းသေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပေါ်သည့် ထိုအရည်အိတ်များ တည်ရခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းသည် အသက်ကြီးခြင်း၊ အစားအသောက်မကောင်းခြင်းနှင့် ဘဝနေထိုင်ပုံတို့ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ အသည်းအဆီဖုံးနေသူများတွင် ထိုအရည်အိတ်များသည် “အဆီပစ္စည်းများ” နှင့် ပြည့်နေတတ်သည်။ အသည်းမှာ ပမာဏကြီးသောကြောင့် အသည်းလုပ်ငန်းကို ဟန်မပျက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အကောင်းနေရာများ ကျန်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီအရည်အိတ်များအား အသည်းရောဂါဟု မသတ်မှတ်ပါ။
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်းအများစု၏ အကြောင်းရင်းကို မသိရပါ။ မွေးကတည်းက ပါလာနိုင်သလို အသက်ကြီးမှ ပေါ်လာသည်လည်း ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် သူတို့သည် ဖြေးဖြေးချင်း ကြီးထွားကာ အရွယ်ရောက်သည်အထိ ရှာတွေ့နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
တစ်ချို့အရည်အိတ်များကတော့ echinicoccus ဟုခေါ်သော ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ သိုးများတွင်တွေ့ရသည့် ကပ်ပါးပိုးကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းပင်။
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများတွင် ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ၁.၅ : ၁ အမျိုးသမီး အမျိုးသားအချိုး ရှိနိုင်သည်။ လူများ အသက်ကြီးလာသည်နှင့် ရောဂါတွေ့ရှိရနှုန်းသည် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုတွေ့ရနှုန်း မြင့်လာပါသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်း တို့လို တခြားအသည်းရောဂါများကြောင့် ဖြစ်ရသည့် Fibrosis နှင့် အသည်းခြောက်ခြင်းတို့သည် အသည်းအရည်အိတ်တည်ရန် သို့ အရည်အိတ်များသောရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများစေသည်မဟုတ်ပါ။
မွေးရာပါ အသည်း fibrosis ဝင်ခြင်းကတော့ အရည်အိတ်များနှင့် ဆက်နွယ်နိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်လည်း ဆင်ဆင်တူသည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် အသည်းခြောက်ခြင်းကတော့ အရည်အိတ်ဖြစ်နိုင်ချေ မြင့်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်းသည် ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်၊ တီဗီဓါတ်မှန် သို့ သံလိုက်ဓါတ်မှန်များလို ပုံရိပ်ဖော်စနစ်များကိုသုံးပြီး ရောဂါအမည်တပ်နိုင်သည်။ (မကြာခဏဆိုသလို မတော်တဆတွေ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်) သမားတော်မှ အရည်အိတ်စမ်းမိခြင်းရှိမရှိ ဗိုက်ကို စမ်းသပ်ပါလိမ့်မည်။
echinococcosis ကြောင့် အရည်အိတ်တည်ခြင်းကိုတော့ immunodiagnostic စစ်ဆေးမှုများ – ၎င်းတွင် Echinococcus ပဋိပစ္စည်းများကို သွေးထဲတွင် တွေ့ရမည် – ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Hepatic Cyst (အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရည်အိတ်အတွက် ကုသရန်မလိုအပ်တတ်ပါ။ အလိုလိုပျောက်နိုင်ပါသည်။ ကြီးလာသောကြောင့် သို့မဟုတ် ကင်ဆာနှင့်ဆိုင်သော အိတ်များကိုတော့ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရသည်။ အရည်စုပ်ထုပ်ခြင်းလဲ လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ခဏတာသာ သက်သာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သော အရည်အိတ်များသည့်အသည်းရောဂါများတွင်တော့ အသည်းအစားထိုးခြင်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်း – အသည်းအရည်အိတ်များကို လုံးဝဖယ်ရှားရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းပင်။ အထူးသဖြင့် cystadenoma နှင့် cystadenocarcinoma တို့တွင် ပိုကောင်း၏။ ဝမ်းတွင်းကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ခွဲစိတ်နိုင်သည်။ အန္တရာယ်နည်းသော ခွဲစိတ်မှုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းများအား ပြွန်သေးသေးများတွင်ထည့်ကာ ဗိုက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ခွဲခြင်းဖြစ်သည်။
ဆေးကုထုံး – echinococcosis ကြောင့်ဖြစ်သော ကပ်ပါးအရည်အိတ်များကိုတော့ ခွဲစိတ်မှုနှင့်အတူ လက္ခဏာများနည်းစေရန် ဆေးသောက်ပြီး နှစ်နှစ်လောက်ထိ ကုရပါသည်။ ကပ်ပါးကောင်များကိုကုသရန်အတွက် ဆေးသောက်ရန် ညွှန်ပါလိမ့်မည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အသည်းအရည်အိတ်တည်ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသောနေရာများတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှ သင့်၌ အသည်းဆဲလ်ပျက်စီးသောကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် အရည်အိတ် (ရိုးရှင်းသော အရည်အိတ်) တစ်ခု သို့ အများအပြားတွေ့ရသည်ဟု ပြောလျှင် လန့်မသွားပါနှင့်။ ဒီအိတ်များ ထပ်မတိုးလာလိုဘူးဆိုပါက ပွားမလာဖို့ရာ တားဖို့ လွယ်ကူပါသည်။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် ဓါတ်စာကုထုံးဖြင့် တဖြည်းဖြည်းရှုံသွားစေနိုင်ပါသည်။
သင့်စားသုံးနေသည်များမှ နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို ရှောင်လိုက်ပါ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင်ပါသော ဟော်မုန်းများသည် အရည်အိတ်များနှင့် ခန္ဓါကိုယ်တွင် အကျိအချွဲများခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရက်၊ ဆေးဝါးတစ်ချို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဓါတုပစ္စည်းများနှင့် သကြားအလွန်အကျွံ စားခြင်း စသည့် အသည်းထိခိုက်စေသည့်အရာများကို ရှောင်ပါ။
ဆီလီနီယမ်အားဆေး သောက်ပါ။ သင့်အသည်းမှ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင့်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် ဂလူတာသိုင်အုမ်း ထွက်စေရန် ဆီလီနီယမ်လိုအပ်ပါသည်။
ဆီလီနီယမ်သည် အသည်းဆဲလ်များ ထိခိုက်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုပါသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစိမ်းဖျော်ရည်များ ပုံမှန်သောက်ပါ။ အသည်းအတွက်ကောင်းသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် ကိုက်လန်၊ ပန်းမုန်လာစိမ်း၊ မုန်လာဥနီနှင့် ကြက်သွန်။ မုန်လာဥနီနှင့် ပန်းသီးကို ဖျော်သောက်ခြင်းသည် အရသာအလွန်ရှိပါသည်။
Liver cysts: What they are and what to do about them. https://www.liverdoctor.com/liver-cysts-article/. Accessed2Jan 2017
Advances in Hepatology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2886389/. Accessed2Jan 2017
Liver Cysts. http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/livercysts/. Accessed2Jan 2017
Liver Cysts – Simple Cysts, Echinococcosis, Cystic Tumors and PLD. http://www.innerbody.com/diseases-conditions/liver-cysts. Accessed2Jan 2017